Fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny hadisoana "xxx.mdf Tsy rakitra tahiry fototra."
Home Products DataNumen SQL Recovery xxx.mdf Tsy rakitra tahiry data voalohany
Rehefa manandrana mampiditra tahiry .MDF ao anaty SQL Server, hitanao izao hafatra diso izao:
Tsy nahavita naka ny angon-drakitra momba ity fangatahana ity. (Microsoft.SqlServer.Management.Sdk.Sfc)
Nisy ny fanavakavahana iray raha nanatanteraka fanambarana na batch batch Transact-SQL. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo)
xxx.mdf dia tsy rakitra tahiry data voalohany. (Microsoft SQL Server, Hadisoana: 5171)
izay 'xxx.mdf no anaran'ny fisie MDF hapetaka.
Ny tahirin-kevitra ao amin'ny rakitra MDF dia voatahiry ho pejy, ny pejy tsirairay dia 8KB. Ny pejy voalohany dia antsoina hoe pejy lohatenin'ny rakitra, izay misy ny most fampahalalana manan-danja momba ny fisie iray manontolo, toy ny sonia fisie, haben'ny rakitra, mifanentana sns. Ireo pejy ambiny koa dia mirakitra fampahalalana lehibe, ao anatin'izany ny fampahalalana ny fizarana pejy ary koa ny tena angona.
Raha ny pejy lohateny MDF, na pejy fitantanana manan-danja hafa dia simba na simba, ary tsy eken'ny Microsoft SQL Server, dia SQL Server hieritreritra ve fa ny rakitra iray manontolo dia tsy rakitra tahiry data voalohany ary mitory ity lesoka ity.